သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၁၁) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၁၁)
Author: lubo601 | 8:37 PM | No မှတ်ချက် |
ကျောက်ဖြူတွင် ကျောင်းသားအချင်းချင်း ဓားထိုးမှု ဖြစ်၍ တစ်ဦးသေ
ဖါးကန့်မြို့နယ်က မြေစာပုံပြိုကျမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေ
သာယာဝတီထောင်တွင်းက ကျောင်းသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ
သုံးဘီးဆိုင်ကယ် လမ်းဘေးချောက်အတွင်း ပြုတ်ကျ ၁ ဦးသေ၊ ၆ ဦးဒဏ်ရာရ
လျှပ်စစ်မီးဖို ထမင်းအိုးတည်ရာမှ အပူလွန်ကဲ၍ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
အိုဘားမားနဲ့ ဦးသိန်းစိန် မလေးရှားမှာ တွေ့ဆုံ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်တရားခံ ၂ ဦး ကွပ်မျက်
အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကြိုးပေးကွပ်မျက်
စွန့်ပစ်မြေစာပုံ ပြိုကျရာမှ လူပေါင်းရာချီ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ဖိတ်ကြား
ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ မြေစာပုံပြိုပြီး လူ၅၀ထက်မနည်း သေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဘယ်သူ့ ရွေးမလဲ
စစ်ဘေးသင့် ရှမ်းပြည်သူတွေ အတွက် ကယားလူငယ်တွေ အလှူခံလှုပ်ရှား
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန် ကြဖို့ တပ်မတော် ညွှန်ကြား
နိုဝင်ဘာလ(၂၀) ရက်နေ့8 Days Journal Vol7No 32
နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ ထုတ် Hot News Weekly Vol6No 269
နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ
နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ
နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ ထုတ် The Messenger Daily Newspaper
Posted: 22 Nov 2015 03:52 AM PST
ဖါးကန့်တွင် စွန့်ပစ်မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးသူများအား ရှာဖွေနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မြဝတီ) ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆန်ခတ်ကူးကျေးရွာတွင် စွန့်ပစ်မြေစာပုံ ပြိုကျမှုကြောင့် စုစုပေါင်း ၉၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးတင်ဆွေမြင့် မှ ဆင်ဟွာကို ယနေ့ ပြောကြားသည်။ ဦးတင်ဆွေမြင့်က “ကျွန်တော်တို့ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ည၈ နာရီ
Posted: 22 Nov 2015 03:32 AM PST
ကျောက်ဖြူ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ကျောင်းသားအချင်းချင်း ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား၍ ၁၀ တန်းကျောင်းသား တစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း ကျောက်ဖြူရဲစခန်းမှ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၁၀ နာရီခန့်တွင် ကျောက်ဖြူမြို့၊ ကားကြီးကွင်း၊ မဟာဘုံကထိန် အထိမ်း အမှတ် စတိတ်ရှိုးပွဲတွင် စကားများကြရာမှ ရှစ်တန်းကျောင်းသား မောင်ကျော်လင်းထွန်း(ခ)မောင်ချေ (၁၅)နှစ်မှ ဓါးဖြင့် ထိုးသဖြင့် ဆယ်
Posted: 22 Nov 2015 03:29 AM PST
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူ (ဆိုင်းတောင် ) ကျေးရွာအုပ်စုမှာ မနေ့က ကျောက်စိမ်းတွင်း ကုမ္ပဏီတွေက စွန့်ပစ်တဲ့ မြေစာပုံပြိုကျတဲ့အတွက် လူပေါင်းရာချီပြီး မြေစာပိသေဆုံးခဲ့ပြီး ရုပ်အလောင်း ၉ဝ ကျော် တူးဖော်ရရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖားကန့်မြို့နယ်က ကျောက်စိမ်းတွင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့ မြေစာပုံတွေနဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို RFA သတင်းထောက် မဇာဏီထွဏ်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ RFA Burmese
Posted: 22 Nov 2015 03:26 AM PST
သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကျောင်းသူ မဟန်နီဦးကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတင်ပြီး ဆေးကုသဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သာယာဝတီထောင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟန်နီဦးရဲ့ ဖခင် ဦးထွန်းဦးကို RFA အဖွဲ့သား ဦးခင်မောင်စိုးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ RFA Burmese
Posted: 22 Nov 2015 03:10 AM PST
မကွေး နိုဝင်ဘာ ၂၀ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ မကွေးမြို့၊ အမှတ်(၄) ယာဉ်ထိန်းရဲ ဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီအချိန်ခန့် မကွေးမြို့၊ မြသလွန်ဘုရား အတက်လမ်းတွင် သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်ကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ ဘုရားလမ်းအတိုင်း မြို့တွင်းဘက်မှ မြသလွန်ဘုရားဘက်သို့ မကွေးမြို့၊ ရန်နိုင်ရပ်ကွက် နေသူ ယာဉ်မောင်းပိုက်ထွေး (၃၈) နှစ်ေ
Posted: 22 Nov 2015 03:07 AM PST
မန္တလေး နိုဝင်ဘာ ၂၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၇လမ်းနှင့် ၅၈ လမ်းကြားရှိ (ဃ) ရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(ဘ-၂) ရပ်ကွက်တွင် ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ်က လျှပ်စစ်မီးဖို ထမင်းအိုးတည်ရာမှ အပူလွန်ကဲ၍ မီးလောင် ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ထရံကာကပ်မိုး(၇)လုံး၊ နှစ်ထပ် ထရံကာသွပ်မိုး (၂)လုံး၊ ထရံကာ သွပ်မိုး(၂)လုံး စုစုပေါင်း နေအိမ် (၁၁)လုံး မီးလောင်ကျွမ်းရာ မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရန်
Posted: 21 Nov 2015 06:54 PM PST
(Credit: Ye Htut's Facebook) မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) နဲ့ အရှေ့အာရှနိုင်ငံများ ထိပ်သီးညီလာခံမှာ စနေနေ့က အမေရိကန် သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမားနဲ့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ ခဏတာ တွေ့ဆုံပြီး - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ကြ တယ်လို့ မြန်မာသမ္မတရုံးရဲ့ ပြောခွင့်ရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထား
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ သြဇာကြီးတဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးကို ၁၉၇၁ ခုနှစ် ပါကစ္စတန် လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲအတွင်း စစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုနဲ့ ကွပ်မျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ BNP ပါတီခေါင်းဆောင် Salahuddin Quader Chowdhury နဲ့ Jamaat-e- Islami ပါတီ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Ali Ahsan Mohammad Mujahid တို့ကို စနေနေ့ညမှာ ကွပ်မျက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Chowdhury နဲ့
အလီ အာဆန် မိုဟာမက်ဒ် မူဂျာဟစ်ဒ် ဟာ ဂျမအာ့တ် အစ္စလာမ်မီ ရဲ့ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ မှာ စစ်ရာဇဝတ်မှု ပုဒ်မ တွေ နဲ့ သေဒဏ် ချမှတ် ခံထားရတဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ၂ ဦး ကို ကွပ်မျက် စီရင် လိုက် ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလာဟူဒင် ကွာဒါ ချောင်ဒရီ နဲ့ အလီ အာဆန် မိုဟာမက်ဒ် မူဂျာဟစ်ဒ် တို့ ၂ ဦး ဟာ ၁၉၇၁ ခုနှစ် တုန်းက ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လွတ်မြောက်ရေး
Posted: 21 Nov 2015 06:33 PM PST
ဖားကန့် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆန်ခတ်ကူးကျေးရွာတွင် ယနေ့ နံနက်က စွန့်ပစ်မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၈ဝ ခန့် မြေမြုပ်ကာ လူပေါင်းရာချီ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ပြိုကျသွားသည့် မြေစာပုံ အောက်ခြေတစ်ဝိုက်တွင် ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြသည့်တဲအများအပြားရှိပြီး မြေစာပုံပြိုကျချိန်မှာ ဒေသခံများတဲများအတွင်း အိပ်နေကြချိန်ဖြစ်၍ လူသေဆုံးမှုများနိုင်ြေ
Posted: 21 Nov 2015 02:13 PM PST
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတွေ့ရစဉ်။ Photo: RFA ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂျပန်နိုင်ငံကို အရင်ဆုံးလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက ဖိတ်ကြားလိုက်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းကိုလည်း ဂျပ
ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီက စွန့်ပစ်ထားတဲ့ မြေစာပုံ ပြိုကျလို့ ရေမဆေး ကျောက်ရှာသူတွေ မကြာခဏ သေဆုံးရ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆန်ခတ်ကူး ကျေးရွာအနီးက ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီက စွန့်ပစ်ထားတဲ့ မြေစာပုံ ပြိုကျ ခဲ့မှုကြောင့် လူ၅၀နီးပါး သေဆုံးခဲ့သလို အတော်များများ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့ မနက်လင်းအားကြီး ၄နာရီလောက်က အခုလို မြေစာပုံ ရုတ်တရက် ပြိုကျခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နေ့လည် ၃နာ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် နေရာကို သင့်တော်သူသာ ရွေးကြေစေလို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ဆုံး မဲရလဒ်တွေ ကြေညာ အပြီးမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ ရခိုင် အမျိုးသား ပါတီက ၂၂ နေရာ အနိုင်ရရှိ ထားပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ၈ နေရာနဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးက ၃ နေရာ အသီးသီး အနိုင် ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင် အမျိုးသား ပါတီဟာ ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ အမတ်နေရာ အများဆုံး ရရှိ ထားတဲ့ အတွက် လွှတ်တော်နဲ့ြ
နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ကယားပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ အလှူငွေ ကောက်ခံနေစဉ်။ Photo: Nay Thwae/RFA ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ကယားပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ကယန်းမျိုးဆက်သစ် လူငယ်နဲ့ ကယားပြည်နယ်က နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစုပေါင်းပြီး ဒီမော်ဆိုမြို့၊ မြို့မဈေးမှာ ဒီကနေ့ အလှူခံခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလိုက်လံကောက်ခံရရှိလာတဲ့ အလှူေ
Posted: 21 Nov 2015 02:12 PM PST
အစိုးရတပ်နဲ့ SSPP/SSA တို့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းရှုးမြို့နယ် ဟိုက်ပါကျေးရွာမှာ တွေ့ရစဉ်။ Photo: Kan Thar/RFA ရှမ်းပြည်နယ်အလယ်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့တစ်ဝိုက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ တာကြောင့် ကျေးရွာတွေကနေ ထွက်ပြေးကြတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်မှာ ပြန်နေကြဖို့ တပ်မတော်ဘက်က ပြန်ခေါ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တပ်မတော်ကနေ မိုင်းနော
Posted: 21 Nov 2015 01:49 PM PST
နိုဝင်ဘာလ(၂၀) ရက်နေ့8 Days Journal Vol7No 32 ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ ထုတ် Hot News Weekly Vol6No 269 ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 21 Nov 2015 01:48 PM PST
နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 21 Nov 2015 01:47 PM PST
နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ ထုတ် The Messenger Daily Newspaper သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ယောက်ျားတွေ ဘာလို့ လိမ်ပြောကြသလဲ
အဆင့်တစ်မရတော့ ဘာဖြစ်လဲ ( မောင်သာချို)
iPhone တီထွင်သူ စတိဂျော့ရဲ့နောက်ဆုံးစကား
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည နှင့် ဆေးဖက်ဝင် မဲဇလီပင်လေးမျ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၆-၁၁)
လော်စပီကာဥပဒေ ထိရောက်စိုးမိုးမှု ရှိစေရန် ပြည်သူအမျ...
ပိုက်ဆံကို သုံးသင့်တဲ့နေရာ(၅)မျိုးနဲ့ မသုံးသင့်တဲ့...
တချိန်က ဗိုလ်ချုပ်အစည်းအဝေးလာတက်တဲ့ VIDEO
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၁၁)
တနေ့ ယောက္ခမ ဖြစ်မဲ့မိခင်လောင်းလေးများသို့
ရွှေ ( Gold )အထည် အကြောင်းသိကောင်းစရာ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၄-၁၁)
အရမ်းကို စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါပဲ
အတ္တကြောင့် ကြွေလွှင့်ခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့်
တရုတ်တို့ကို အကြိမ်ကြိမ်အောင်နိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာစစ...
````` ရာသီချိန်မဟုတ် သရက်သီး၊ သီးစေရန် ´´´´´
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၃-၁၁)
ကျွန်ုပ်ရွှေပင်ဆြာဒင်၏ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများသို့ အမ...
အိမ်ထောင်ပြုတော့မည့် သမီးဖြစ်သူကို အမေက ပြောဆိုဆံ...
နီတိ ၊ ဥပဒေကရဏ နှင့် ဝိမုတ္တိဖြစ်စဉ် ကထာ (၃)
ဦးသန့် သို့မဟုတ် မီးလျံထဲက ပန်းတပွင့်
အေးမေ ကို ပေး…ပေးပါ ။
အလိုက်သိတတ်သောမိန်းမ နှင့် အတ္တကြီးမိသောကျွန်တော်
မောင့်မှာ ရဟန်းဖြစ်သောကြောင့် ( အပိုင်း ၁ )
''မဒမ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီသွားရင် ကျွန်တော် ဘာဝတ်ရမလဲ''
“အရောင်တင် အိပ်မက်နှင့် အနာဂတ် နိုင်ငံတော်”
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၁-၁၁)
ပျဉ်းမနားမြို့ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမ...
အကြီးလား၊ အလတ်လား၊ အငယ်လား
စာပေဟောပြောပွဲ (၁၃၅)ပုဒ် MP3 စုစည်းမှု
ဆင်းတု ကိုးကွယ်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၇-၁၁)
၀မ်းမြောက် လေးစားစွာ အသိပေးပါသည်ရှင့်
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကလေးကို မဆုံးမပါနဲ့
" သူဘယ်တော့မှ အရက် မသောက်တော့ပါဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆ...
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မလုပ်ခဲ့ပါက အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သင်တွေ့...
ဘောမချင်းအနုပညာ။ (Second Edition)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၆-၁၁)
ဟာသပေါင်းချုပ် ( ၁၅ - ၁၁ )
ကာတွန်းဝိဇ္ဇာရဲ့ "တာယာပွကြီး"ပါဝင်သော စာအုပ် ၆၉ အုပ...
အမေ့စကားကို နားထောင်သင့်လား? ဇနီးမယားရဲ့ စကားကိုနာ...
မောင်ကောင်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ..
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၅-၁၁)
ဘ၀တန်ဖိုး (The value of life...)
ကြိုးသုံးချောင်းတော.ကျန်နေမည် သရ၀ဏ် (ပြည်)
အိုင်ဖုန်းတွေကိုင်တော့မယ်ဆို ဒီဟာတွေ မသိမဖြစ်
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၄-၁၁)
'' Thinking '' နဲ့ '' Teaching '' ခွဲခြားတတ်ဖို့ 
သားဖွားနှင့်မီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးလွင...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၃-၁၁)
ပါးစပ်နံသော ပြသာနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၂-၁၁)
တူမောင်ကြီးသိန်းစိန်သို့ ပေးစာ - ၂၁